Hay'ada dowlada ah oo malaayiin ku bixisay xaflado - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hay'ada dowlada ah oo malaayiin ku bixisay xaflado
La daabacay tisdag 14 augusti 2012 kl 09.33
Hay'ada ayaa malaayiin karoon siisay qof xafladaha agaasima. Fotomontage SR Bilder: Scanpix.
Hay’ada qorsheynta cilmi baarista ayaa lagu waramayaa in ay ku bixisay dhowr milyan karoon oo loogu tala galay cilmi baaris xaflado, sida uu soo qoray wargeyska DN.
Hay’adan ayaa noqoneysaa tii labaad ee dowlada ah oo lagu helo ku takri fal maaliyadeed iyada oo ay ka horreysay hay’ada kobcinta dhaqaalaha oo agaasimaheeda laga ceyriyay shaqada.
Wargeyska DN ayaa soo qoray in muddo saddex sano ay hay’adu bixisay lacag gaareysa 9,3 milyan oo karoon iyada oo lacagtaasi uu qaatay qof xafladaha abaabule oo la yiraahdo Michael Bindefeld, laakiin ma kala cada wax sida dhabta ah lagu bixiyay lacagtaasi. Heshiiska lala galay qofkan abaabula xafladaha ayaa la saxiixay iyada oo hay’ada aysan gelin heshiis caadi ah oo la wada ogyahay.
Xaflad loo dhigay marka ay hay’adan jirsatay 15 sano ayaa waxaa lagu qabtay goobta la yiraahdo Blå Hallen ee aqalka maamulka gobolka ee Stockholm iyada oo loo ekeysiisay sida cashada lagu bixiyo abaalmarinta Nobel waxaana xafladaasi ka soo qeyb galay mart gaareysa 500 oo ay ka mid ahaayeen maamulayaal gobol, agaasimayaal, weriyayaal, wasiirka waxbarashada Jan Björklund iyo wasiirkii hore ee cilmi baarista Tobias Krantz. Xafladaasi ayaa waxaa ku baxay qarash gaaraya labo milyan.
Qarashkaasi ku baxay xaflada ayaa diiwaanka xisaabta waxaa lagu qoray in ay aheyd deeq cilmi baaris. Diiwaan gelinta guudna, waxaa qarashkaasi loogu magac daray l "MBAB informationsprojekt", sida uu soo qoray wargeyska DN. Qarashkaasi xaflada oo ay ugu aamusatay hay’ada si dadban ayaa waxaa keliya lagu xusay warbixin sanadeedkii hay’ada ee 2009.
Heshiiska lala galay xafald oogaha la yiraahdo Michael Bindefeld ayaa sida uu ku waramayo wargeyska DN waxaa ka taagan su’aal. Madaxa hay’adan Lars Rask oo la hadlay waregyska DN ayaa sheegayain uu ka xun yahay hadda in uusan ku wargelin shaqaalaha hay’ada in heshiisyada ceynkaasi ah loo baahanyahay in la qaabeeyo.
-Waxaan ku nool nahay meel u dhaxeysa nolosha gaarka iyo mida guud. Laakiin way iska cadahay marka la eego sharciga jira in arrinak iska cad yahay, waxay ila tahay in ay iska cadahay in qofka mar walbo ay tahay in si taxadar leh u dadaalo, ayuu yiri Rask.